Sirta Caafimaadka Iyo Soonka Bisha Barakaysan Ee Ramadaan — Dr. Saadiq Eenow | Foore News
Home Aragtida Dadweynaha Sirta Caafimaadka Iyo Soonka Bisha Barakaysan Ee Ramadaan — Dr. Saadiq...
Sirta Caafimaadka Iyo Soonka Bisha Barakaysan Ee Ramadaan — Dr. Saadiq Eenow
Diinta Islaamka oo caqiido dhab ah, ayaa waxay ku caan baxday ilaalada masaalixda aadamiga. Arintaas waxay ku soo koobtay, qof kasta oo ku abtirsada bulshada aadamiga, in la dhowro hantidiisa, sharafkiisa, naftiisa wakhtigiisa iyo caafimaadkiisa. Wax kasta oo dhaawac u geysanaya mid kamid ah arimahaas, diinta Islaamku waa ay reebtay. Waxay ka dejisay xeerar adag oo ilaalinaya inaan lagu cayaarin. Islamarkaa Islaamku wuxuu soo dhoweeyay wax kasta oo arimahaas hagaajinaya. Bal cibaado ayuu ka dhigtay, Eebe xaggiisa lagaga helayo dhowaansho iyo abaal-gud. Caafimaadka jirka aadamiga, waa maslaxadda 1-aad oo diinta Islaamku ay qofka iyo bulshada u ilaalisay. Nicmadaha Eebe uu ku manaystay aadamiga, midka ugu hilan culus waa caafimaadka. Sidaa darteed in la dhowro waa waajib uu islaamku goor hore dalbay. Ilaalada caafimaadka, danta laga leeyahay waxay tahay in qofku uusan gabin ujeeddadii loo abuuray ee keentay uunka, taas oo ah, fal cibaado iyo mid cilmi ah in uu ku camiro dhulka.
Si haddaba loo dhowro nicmaddaas milgaha weyn, Eebe wuxuu inoo dooray waddadii lagu ilaalin lahaa. Soonka bisha Ramadaan ayaa wuxuu yahay cibaado kamid ah tiirarka lagu joojiyay waajibaadka diinta Islaamka. Islamarkaa, soonku waa mashruuc culus oo ilaalinaya caafimaadka qofka iyo bulshada. Waxaa la ogaaday in caafimaadka qofku, uu la xiriiro hab-dhaqameedka uu ku nool yahay. Talooyinka taraakhiitarta, howlaha kalkaaliyayaasha, qalabka loo adeegsado daweynta, dawooyinka iyo hay’adaha caafimaadka, ilaha ka hor-tagga cudurada, dhamaantood doorka ay ka qaataan caafimaadka qofka iyo bulshada, ma dhaafsiisna 80 %. Bulshada aqoonta leh, xubnaheeda waxay ka caafimaad badan yihiin bulshada aqoonta liidata. Bulshada hodanka ah, waxay ka caafimaad sareysaa bulshada saboolka ah. Bulshada baraaruggeedu sareeyo, waxay ka caafimaad wanaagsan tahay bulshada huruda. Run-badanaha aanan weedhiisa la beenin, Suubane Maxamad (shacni iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee), goor hore ayuu inoo tilmaamay xiriirka adag ee ka dhexeeyo soonka iyo ilaalada maslaxadda caafimaadka. Isagoo arinkaa ka hadlaya, wuxuu yiri :
” Sooma’ aad caafimaaddeene “.
Weedhan kooban waa ooraah-cilmiyeed. Si xooggan ayay u tilmaamaysaa dhab ahaanta risaaladda uu la yimid adeegaha Eebe Maxamad (sh.n.d.a.). Ereygaasi maahan ooraah ka iman karta qof aan wax akhriyin waxna qorin. Sidaa darteed ooraahdan, waa mid dhoobo afka kaga dhufanaysa kuwa xaasidnimada iyo xiqdiga u geeyay in ay ku hadaaqaan in nebigii islaamka aanan laga dhaxlin wax kheyr ah iyo wax caqligu waafaqo. Ooraah kooban weeye oo kheyr badan xambaarsan, islamarkaa ku dhisan aqoon asraarteeda la ogaaday qarnigii 20-aad.
Noolaleyda bahaahimka ah ee dhulka nagula nool ayaa ka markhaati kacaya in soonku yahay risaalad xagga Eebe ka timid. In uu yahay nadaam sanadle ah, ee lagu ilaalinayo masaalix badan oo caafimaadku u horeeyo. Nadaamka ah raashinka oo xilli laga soomo, maahan mid ku eg aadamiga oo keliya. Bal xayawaan badan ayaa nala wadaaga caadadaas qiimiga badan. Dadka u kuurgala aqoonta barashada buubaaleyda, waxay ogaadeen, qaar badan oo shimbiraha kamid ah, in ay soomaan. Waxay caddeeyeen in shimbirahaasi ay leeyihiin caado sanadle ah, taas oo ay ku joojinayaan raashinka ay qaataan. Iyada oo markaas ay jirto in ay heli karaan raashinkii ay cunayeen, ayay muddo ka hakadaan in ay miraha cunaan.
Sidoo kale, waxaa la helay kalluun ku nool moolka badaha iyo kuwo kale oo ku nool webiyada. Iyaga qudhoodu waxay leeyihiin xeer lagu soomo. Markaas ay soomayaan, waxay aadaan ciidda badda ama webiyada salkooda ah. Halkaas ayay isku aasaan oo ay muddo ku soonaadaan, iyada oo hareerahooda ay buuxaan quutkii ay calfan jireen. Soonkaas ay xooluhu nala wadaagaan, waxaa nala wadaagey ummado badan ee naga horeeyay. Kuwo badan oo naga danbeeyana waa ay jiri doonaan, kuwaas oo xambaara risaalada soonka ee waajibka ah.
Maslaxad ruuxi ah, mid nafsi ah iyo mid bulshadeed ayuu soonku xambaarsan yahay. Midda caafimaadka oo qof kasta si gaar ah u taabanaysa, ayaa casharkan inaga khuseeya. Xilli hore ayuu aadamigu ogaaday in calooshu tahay hooyada cudurada. Waa xubin xarun u ah wax kasta oo dibadda ka imanaya oo u gudbaya jirka gudihiisa. Waxaa caloosha ku hakada raashinka la cuno iyo biyaha la cabo. Gudaheeda waxaa ka dhaca howlo qallafsan oo lagu dhaqan rogayo dhisma-hoosaadka raashinka la quuto iyo cimiladiisa. Hannaankaas ayaa loo yaqaan Dheef-shiid (Digestive System). Raashinku markuu dhaafo dhuunta iyo hunguriga, waxaa howlihiisa la wareegaya awood ka baxsan dareenka qofka. Marka horeba waxaa u furmaya albaabka kore ee caloosha (cardiac sphincter). Waxaa xusid mudan, in albaabka uu xirmanayo markii qeyb raashin ahba ay gudbaan. Haddii taasi la waayo, raashinkii la dhunjiyay, wuxuu dib ugu soo laabanayaa hunguriga iyo dhuunta. Dabadeedna afka ayuu ka soo qubanayaa.
Quutkii qofku dhunjiyay, wuxuu gaarayaa caloosha. Waxaa markaas ku soo qubanaya dheecaano (Enzyms) ka imanaya qanjirro yar-yar oo caloosha gudaha iyo debadda kaga rakiban. Waxay qayb ka qaataan dhalan-rogga raashinka (Metabolism). Waa ay jejebinayaan, si markaas uu raashinkii u noqdo mid unugyadii jirka ay ka faa’iideysan karaan. Dheecaanada caloosha waxaa lagu magacaabaa Hydrochloric Acid ama Gastric Acid.
Tirada noocyada, tayada iyo mugga dheecaanada, maahan mid uu qofku ku xukumo dareen iyo doonis. Bal waxaa xukuma raashinka la qaatay noocyadiisa, tayadiisa iyo muggiisa. Howsha dheecaan qubashada ayaa culimadu waxay u yaqaaniin Involuntary Reflex Action. Dheecaanadaas, oo qofku uusan u lahayn awood uu ku xakameeyo, ayaa marar khalal galaa. Waxay soo qubtaan iyada oo calooshu ay maran tahay. Dhaawac culus ayay markaas u geystaan gidaarka (xuubka) gudaha ah ee caloosha. Raadka caafimaad oo soonka jirka ku reebo waxaa kamid ah, in uu hagaajiyo soo qubashada dheecaanadaas.
Ivan Petrovich Pavlov, waa aqoonyahan u dhashay dalka Ruushka. Wuxuu waalid ka yahay aqoonta ku beegan dheecaanadaas iyo danqashada qanjirada ay ka yimaadaan. Tijaabo uu sameeyay qarnigii tegay bilowgiisii, ayuu ku guuleystay in uu soo bandhigo faallo la xiriirta dheecaamada caloosha ku qubto iyo in raashinka oo keliya uusan ahayn waxyaabaha sababa in ay soo qubtaan. Tijaabadiisii wuxuu u doortay ey uu qafis geliyay. Dabadeed halkaas ayuu muddo ku quudinayay. Markasta oo eyga uu raashin siinayo wuxuu ka hor marin jirey koor (gambaleel) uu yeersho oo eyga uu maqashiiyo. Markuu muddo sidaas ku waday ayuu eygii calooshiisii qalliin ku sameeyay. Wuxuu ku xiray tubo yar oo dibadda u soo baxsan, taas oo gaarsiisan gudaha caloosha. Afkii tubada ee dibadda yiil, quraarad ayuu la xiriirshay. Wuxuu helay, markasta oo oo koorta uu ka dhawaajiyo, in dheecaanadii ay soo qubanayaan, iyada oo aanan eygii la siin wax raashin ah. Waxaa halkaas laga ogaaday in ay jiraan cimilo aanan ahayn raashin la qaato oo dheecaanada ay ku soo quban karaan. Sanadkii 1904-tii, I.P. Pavlov, tijaabadiisaas ayuu ku qaatay shahaadada abaal-gudka ee loo yaqaan Nobel Prize.
Caadada eyga calooshiisu baratay oo ah koorta ka horeysa raashinka, waxaa lamid ah, qofka caadeysta in uu wakhti go’an, sida joogto ah u qaato raashin. Tusaale quraac subaxdii ah, qado duhurkii ah iyo casho fiidkii ah. Markii sanooyin badan ay caloosha caynkaas barato, haddii uu jadwalkii xilliyada ii isbeddel ku yimaado, waxaa dhacaysa in dhacaanadii ay soo qubtaan, iyada oo calooshu maran tahay. Waayo qanjiradii ayaa caadeystay in xilligaas caloosha raashin ku soo dhacaan. Haddaba soonka wuxuu jebinayaa caadadaas rootiinka ah. Qanjiradii dheecaanada ayuu barayaa in eeyan dheecaan ku soo qubin caloosha, illaa uu raashin soo gaaro. Waxaa halkaas lagaga badbaadayaa cuduro badan oo caloosha iyo mindhicirka ku dhaca. Waxaa ugu culus cudurada xanuunka badan ee ah Gastritis iyo Ulcer.
Soonku wuxuu kaloo qabtaa howlo la xiriira, in uu jirka ka fududeeyo haraaga raashinkii tamarta isu beddelay oo jirku adeegsaday. Haraagaas oo dufanku uu ugu milga culus yahay, ayaa jirka ku keena cuduro loo dhinto. Haddii uu dufanku is-biirsado, waxay xayiraan xididdada uu dhiiggu maro. Taasi waxay keentaa fal-celis halis ku ah xubnihii jirka iyo noloshii qofka. Waxaa kamid ah in dhiiggii xayirmay uu xididkii soo dhaafo oo dillaac yimaado, waxaa halkaas ka dhasha cudur uu kamid yahay Stroke (dhiig madaxa ku furma). Ama in dhiigga la xayiray xubintii uu ku socday oo uu gaari waayay, ay howl-gab noqoto. Halkaana waxaa ka dhasha cuduro uu kamid yahay Heart Attack (wadnaha oo joogsada).
Gaajada soonka waxay geeri ku sababtaa unugyada gaboobay ee jirka. Markaas, jirka wuxuu fursad u helayaa in ay abuurmaan unugyo cusub, kuwaas oo ka fir-fircoon unugyadii uu jirku horey u sitay. Waxaa halkaas ku hagaagaya shaqadii ay hayeen dhamaan xubnaha ku rakiban jirka gudihiisa. Taasina, guud-ahaan ayay jirka waxay uga yeeshaa mid fir-fircoon. Halkaas waxaa ka soo baxa tamar dheeri ah oo qofka sooman uu dareemo markii ramadaanku dhamaado.
Tamarta jirku ku shaqeeyo, ayaa is dhimeysa muddada la sooman yahay. Gaajada badan oo soonku wato, waxay sabab u noqonaysaa in jirku adeegsado tamarta brootiinka oo keydka ah, halka uu markiisii hore tamarta ka helayay maaddada carbohydrate-ka ee raashinka la socda. Sidaa darteed, waxaa loo baahanayaa in la adeegsado tamartii keydka ahayd. Markii ay martaan bakhaaradii keydka ku jirey, waxaa halkoodii soo buuxinaya keyd cusub oo jirka caafimaad u leh.
Qofka sooman, maadaama uusan raashin qaadanayn, wuxuu ka nabad gelayaa cunnada xasaasiyadda keenta oo idil. Sidoo kale, haraadka bisha ramadaan, wuxuu wax-tar u leeyahay howsha culus oo wadnaha oo jirka ka qabto. Waxaa jirka ku yaraanaya biyihii la cabayay, sidaa darteed waxaa is-dhimaya biyihii jirka ku jirey. Culeys badan ayaa wadnihii ka degaya oo nasasho ayuu helayaa.
Sidoo kale, cunnada laga soomay waxay caafimaad u tahay qofka qaba cudurka kaadi-sokorta (Diabets) iyo dhiig-karka (HBP). Raashinkii sababayay in cuduradaas ay qofka ku soo baxaan (sokorta iyo cusbada), ayaanan jirka soo gaarayn. Dadka cuduradaas qaba, soonka wuxuu uga dhigan yahay, takhtar daweynaya oo aanan kharash uga baahnayn, kaas oo sanad walba ay hal jeer la kulmayaan.
Cayilka iyo hilibka culus oo qofka fuula, si gaar ah ayuu soonku u daweeyaa. Laakiin waxaa u shardi ah in raashinka la cunayo habeenkii uu ahaado mid isu dheelli-tiran. Islamarkaana socodka la badsado. Sidaas ayaa bisha Ramadaan ay ku noqotay bil caafimaad. Bil xasilooni iyo farxad. Laakiin sida dad badan oo sooman ay u waayaan ajarkii bisha, ayaa dad badan waxay u waayaan caafimaadkii bisha. Suubanihii oo arintaa inoo tilmaamaya wuxuu yiri :
“Badanaa mid sooman, kaas oo aanan soonkiisii ka heleyn wax dhaafsiisan gaajo iyo haraad “.
Anshaxa xumi oo ay kamid yihiin beenta, xanta, dira-dirada, xatooyada, cayda, faduusha, waxay qofka ka hor is-taagaan in uu helo abaalkii soonku lahaa. Waxaa lamid ah xad-gudubka raashin-qaadashada bisha Ramadaan, fadhiga badan iyo hurdada dheeraadka ah ee maalinta Ramadaanka, waxay hoos u dhigayaan faa’iidadii caafimaadka ee laga sugayay soonka. Jirka muddada uu hurdo uma baahna tamar badan oo uu bixiyo. Sidaa darteed, dadka hurdada ku dhamaysta bisha Ramadaan, waxay iska hor-joogsadeen faa’iidadii ugu hilan cuslayd ee soonku lahaa. Taas oo ah, in jirka laga nadiifiyo walxaha haraaga ah ee ku keydsan oo ay ugu horeeyaan sokorta, dufanka iyo brootiinka.
Waxaa halkaas ku cad qiimiga ay leedahay ooraahdii suubaneheenii Maxamad (sh.n.d.a.) ee ahayd (Sooma aad caafimaaddaane). Waxaa kaloo ku cad, in ooraahdu tahay risaalad looga soo dhiibay xagga Eebaha xeer dejiyaha, wax walba ogaha, la keli noqday saamiga iyo talada.
Suuradda Al-Baqara, aayadda 184-aad, waa aayadda xustay waajibnimada soonka. Aayadda xigta (185-aad), waxaa lagu xusay dad loo cudur daaray oo dhibaato haysa darteed looga saamaxay in ay soomaan bisha Ramadaan. Isla aayaddaas dhamaadkeeda ayaa Eebe wuxuu ku leeyahay hadal macnihiisu yahay sidan :
“inaad soontaan ayaa idiin wanaagsan, haddaad tihiin kuwo wax garanaya “.
Xataa haddii uu jiro cudur-daar lala afuro, waxaa u wanaagsan qofka in uu soomo. Waayo soonka isaga ayaa caafimaadka xoojinaya, cuduradana ka hor-tegaya. Eebow adigaa ku mahad leh nicmadahaaga aan la koobi karin. Adigaa ku mahad leh diintaada aad nagu galladday. Adigaa ku mahad leh inaad noo dooratay umaddii nebigaaga Maxamad ah (sh.n.d.a.).
Waa inaan Ilaahay gartaa waa gob qaali ahe
Waa inaan ku gowriirsadaa diintayada guulle
Waa inaan gaboobaye salaad gowda ku hayaaye
Waa inaanan gooshka Ramadaane soo laba gardeyne
Waa inaan sunnuhu kuma gabo’e sii hirgeliyaaye
Waa inaan wardiga gurubsadaa gelin dhexaadkiiye (Khaliif Shiikh Maxamuud)
Previous article“Muusaw Haddii Aad U Badheedhay Inaad Dalkan Dumiso, Anaguna Waanu Kula Duminaynaa”
Next articleSiyaasi Jaamac Shabeel Oo Saddexda Xisbi Qaran Ku Tilmaamay Shandado Saddex Nin Sitaan Lana Gaadhay Wakhtigii La Is Dhaafin Lahaa!